IBS နှင့်ကိုယ်ဝန် - သင်၏ရောဂါလက္ခဏာများကိုမည်သို့လုံခြုံစွာစီမံနိုင်မည်နည်း - ကျန်းမာရေးပညာရေး | ဇွန်လ 2022
သတင်း ကျန်းမာရေးပညာရေး၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆန် မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း ကျန်းမာရေး ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာအချက်အလက် ကျန်းမာရေး မူးယစ်ဆေးဝါး သူငယ်ချင်း ကနျြးမာရေးပညာရေး, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ ဖျော်ဖြေရေး ကုမ္ပဏီ ကုမ္ပဏီ, ကျန်းမာရေးပညာရေး ရပ်ရွာ၊ ရပ်ရွာ ဆေးပညာသတင်း, ကျန်းမာရေးပညာရေး
အဓိက >> ကျန်းမာရေးပညာရေး >> ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်အတွင်း IBS လက္ခဏာများကိုမည်သို့လုံခြုံစွာစီမံခန့်ခွဲရမည်နည်း
ကိုယ်ဝန်သည်အတွေ့အကြုံအသစ်များနှင့်ထူးဆန်းသောအဆင်မပြေမှုအမျိုးမျိုးကိုပေးသည်- ညအိပ်မပျော်ခြင်း၊ နံနက်နေမကောင်းရောဂါနှင့်ပျို့အန်ခြင်း၊ အပူလောင်ခြင်းနှင့်အစာမစားခြင်း - သို့သော်သင်၏ကိုယ်ဝန်ပြcomplaintsနာတစ်ခုမှာ ၀ မ်းလျှောခြင်း၊ ဝမ်းချုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်အရာများဖြစ်ပါကအသို့နည်း။ သင်၏အူသိမ်အလေ့အကျင့်များပြောင်းလဲမှုများ ? စိတ်တိုလွယ်သောအူသိမ်ရောဂါ (IBS) သည်အများအားဖြင့်အစာအိမ်နာကျင်မှု၊ ဓာတ်ငွေ့နှင့်ဖောင်းပွခြင်း၊ ဝမ်းလျှောခြင်းနှင့်ဝမ်းချုပ်ခြင်းစသည့်နာတာရှည်အစာခြေရောဂါလက္ခဏာများမှတစ်ဆင့်သူ့ဟာသူတွေ့ရလေ့ရှိသည်။ IBS နှင့်ကိုယ် ၀ န်ကိုစီမံရန်ဖြစ်နိုင်သည်၊ သို့သော်မည်သည့်အချိန်တွင်အပိုစောင့်ရှောက်မှုနှင့်သတိထားရန်အရေးကြီးသည် သငျသညျကိုယ်ဝန်ဆောင်လျှင်သင်၏ရောဂါလက္ခဏာဖော်ထုတ် ။
သင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်အတွင်း IBS ဖွံ့ဖြိုးနိုင်သည်။ သို့သော်သင်၏ရောဂါလက္ခဏာများအားလုံးကိုအရင်ကြည့်ရှုရန်နှင့်နောက်ခံနောက်ပြanotherနာတစ်ခုရှိမရှိသိရန်အရေးကြီးသည်။ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေသောလူနာများသည် IBS ဖွံ့ဖြိုးရန်ဖြစ်နိုင်သော်လည်းနံနက်ယံရောဂါနှင့်ရင်ပူခြင်းလက္ခဏာများသည်ဆက်စပ်မှုမရှိကြောင်းသီးခြားဖြေရှင်းသင့်ကြောင်းမှတ်သားရန်အရေးကြီးသည်Simranjit Bedi, DO, အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းရောဂါဗေဒနှင့်မိတ်သဟာယဖွဲ့နေတဲ့ Philadelphia တွင်အလုပ်သင်ဆရာဝန်။Dr. Bedi ကလည်းမီးနှင့်ကယ်လ်စီယမ်ကဲ့သို့ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်ဗီတာမင်များမှပါဝင်ပစ္စည်းများသည်ဝမ်းချုပ်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်ဟုဆိုသည်။ ၀ မ်းပျက်ဝမ်းလျှောရောဂါဖြစ်ပွားသူလူနာသည် IBS ဟုမယူဆသင့်ပါ။ အခြားအခြေအနေများအတွက်လည်းစစ်ဆေးသင့်သည်။
IBS မတိုင်မီ IBS ကိုလေ့လာထားပြီးဖြစ်သောလူနာသည်သူတို့၏ကိုယ်ဝန်သည်အူလမ်းကြောင်းအူလမ်းကြောင်းလက္ခဏာများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်သို့မဟုတ်ပိုမိုဆိုးရွားလာစေနိုင်သည့်အကြောင်းအရင်းရှိသည်။ စီစီလီယာ Minano နယူးဂျာစီပြည်နယ် Summit Medical Group မှအစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းအထူးကုဆရာဝန် MD, MPH မှပြောကြားသည်မှာ IBS သည်ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲများ၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုများကြောင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရာတွင်ပိုမိုဆိုးရွားနိုင်သည်ဟုဆိုသည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးအများစုသည်သူတို့၏ကိုယ်ဝန်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများသို့မဟုတ်ရောဂါလက္ခဏာများသည်သူတို့၏မမွေးသေးသောကလေးကိုမထိခိုက်စေကြောင်းသိလိုကြသည်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှအကဲဖြတ်မရတဲ့ ၀ မ်းပျက်ဝမ်းလျှောရောဂါကရေဓာတ်ခန်းခြောက်စေပြီးသန္ဓေသားကိုစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ Dr. Bedi ကဆိုပါတယ်။ အချိန်ကြာကြာချုပ်ထားခြင်းကအစာအိမ်နာကျင်မှုနှင့်အဆင်မပြေမှုကိုတိုးပွားစေနိုင်ပြီးပြင်းထန်သောအခြေအနေများတွင်ကြွက်သားများသို့မဟုတ်အာရုံကြောများပျက်စီးစေနိုင်သည်ဟုသူကထပ်မံပြောကြားခဲ့သည်။
ဒေါက်တာ Minano မှပြောကြားရာတွင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွင် IBS ရှိပါကကိုယ်ဝန်အတွက်နောက်ထပ်အန္တရာယ်များရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်၍ အမြင်များကွဲပြားနေသည်ဟုဆိုသည်။ တစ်ခု ယူကေလေ့လာမှု အူသိမ်အူမရောဂါလက္ခဏာများရှိသည့်အမျိုးသမီးများသည်ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်းနှင့် ၀ မ်းသာခြင်းဆိုင်ရာကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းများမြင့်မားကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ နောက်ထပ်လေ့လာမှု IBS သည်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းအပေါ်သက်ရောက်မှုကိုကန့်သတ်ထားသည်ဟုဆိုသည်
ဒေါက်တာ Minano က IBS ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်းနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိကြောင်းယူကေလေ့လာမှုကအန္တရာယ်ကို IBS လက္ခဏာများနှင့်ဆက်စပ်သည်ဟုမဆိုလိုနိုင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ စိတ်ကျဝေဒနာ၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းသို့မဟုတ်အခြားဆေးဘက်ဆိုင်ရာအခြေအနေများအပါအ ၀ င်နောက်ထပ်ရလဒ်များအနေဖြင့်ဤရလဒ်များတွင်အခန်းကဏ္ played မှပါ ၀ င်နိုင်ကြောင်းစာရေးသူများမှပြောကြားခဲ့သည်။ အရေးကြီးသောကိုယ်ဝန်ဆောင်စောင့်ရှောက်မှုကိုထိန်းသိမ်းရန်အရေးကြီးသည်၊ ထို့ကြောင့်သင်၏ဆရာ ၀ န်သည်အခြေခံကျသောသို့မဟုတ်အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများကိုစောင့်ကြည့်ပြီးကုသနိုင်သည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်အတွင်း IBS အတွက်ကုသမှုနည်းလမ်းအချို့ကားအဘယ်နည်း။
IBS ရောဂါလက္ခဏာများခံစားနေရသောကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတစ် ဦး သည်သူမ၏ရောဂါလက္ခဏာများကိုသက်သာစေရန်နှင့်ပိုမိုသက်တောင့်သက်သာရှိစေရန်အဖြေရှာခြင်းနှင့်ကုသမှုအစီအစဉ်ကိုအကောင်းဆုံးပြုလုပ်လိမ့်မည်။ အကယ်၍ သူမ၌ IBS သမိုင်းမရှိပါကပထမအဆင့်မှာသူမ၏ဆရာဝန်နှင့်ထပ်မံအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲခြင်းတို့နှင့်ဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်သည်။
IBS ရှိရင်ရှိမယ် ဆေးတွေအပေါ်ပြီးသား ဒေါက်တာ Bedi ကဆက်ပြောသည်မှာဆေးဆရာဝန်ကဆက်သောက်ရန်အကြံပြုလိုလျှင်သင့်ဆရာဝန်နှင့်စကားပြောသင့်သည်။
သင်၏အစားအစာကိုမပြောင်းမီ၊ မည်သည့်လက္ခဏာများသည်မည်သည့်လက္ခဏာများဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟုထင်ရကြောင်းမည်သည့်အစားအစာများကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်အစားအစာဂျာနယ်ကိုထားရှိပြီးသင်တွေ့ရှိသည့်အကြောင်းကိုသင်၏ဆရာဝန်အားပြောပြပါ။ IBS ရောဂါလက္ခဏာများကိုကြိုးစားစီမံရန်လူနေမှုဘ ၀ ပုံစံပြောင်းလဲမှုများကိုမိတ်ဆက်ပေးရန်လူနာများကိုတောင်းဆိုလိမ့်မည်။ လူနေမှုပုံစံစတဲ့ပြောင်းလဲမှုအချို့ IBS ရောဂါလက္ခဏာများသည်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်စေနိုင်သည်။
တိုးမြှင့်ဖိုင်ဘာ (အစေ့လုံး, မုယော, ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းကဲ့သို့)
ကြိုးစားနေသည် psyllium ခွံအမှုန့် ဖိုင်ဘာထည့်ရန်
laxatives ယူပြီး Miralax (ဝမ်းချုပ်နေလျှင်)
တစ် ဦး probiotic ယူပြီး
စဉ်းစား အနိမ့် FODMAP အစားအစာ
သငျသညျကဲ့သို့သောမစင်ပျော့ပြောင်းသို့မဟုတ် laxative ယူနိုင်ပါလိမ့်မည် Miralax , အကယ်၍ ဝမ်းချုပ်နေလျှင် - သို့သော်သင်ကဗီတာမင်များ၊ ဆေးများ၊ ဆေးများ၊ ဖြည့်စွက်မှုများ၊ ကုထုံးများမစခင်သင့်ဆရာဝန်နှင့်အမြဲတမ်းပြောဆိုသင့်သည်။
ဒေါက်တာဘက်ဒီနှင့်ဒေါက်တာမီနိုနိုတို့သည် IBS ရှိလူနာများအတွက်ဆေးညွှန်းအမျိုးမျိုးရှိသည်ဟုဆိုကြသည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်အတွင်းလုံခြုံစိတ်ချရသည် ; သို့သော်သင်၏ဆေးဝါးများကိုသင်၏ဆရာဝန်နှင့်ဆွေးနွေးရန်အရေးကြီးသည်။ ဤအများသော IBS ဆေးများဖြစ်နိုင်သည် မဟုတ်ဘူး ကိုယ်ဝန်အတွက်လုံခြုံပါ
ဇီးကွက် (နာတာရှည် IBS နှင့်ဝမ်းချုပ်ခြင်းအတွက်)
Dicyclomine (IBS အတွက်)
လူနာများအနေဖြင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်စောင့်ရှောက်မှုကောင်းရန်လိုအပ်သည်။ သူတို့သည်ရှက်စရာကောင်းသည်ဖြစ်စေမဖြစ်သည်ဖြစ်စေရောဂါလက္ခဏာအားလုံးနှင့် ပတ်သက်၍ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောဆိုရန်လိုအပ်သည်။
Aleve vs Ibuprofen: အဓိကကွာခြားချက်များနှင့်တူညီချက်များ
ကောင်တာပေါ်မှာ phentermine ရနိုင်မလား
Plan B ကိုချက်ချင်းယူလို့ရမလား
ဗီတာမင်ဒီ d2 နှင့် d3 အကြားခြားနားချက်
claritin နဲ့ benadryl ကိုတွဲသောက်လို့ရလား